गर्मीमा बालबालिकालाई किन आउँछन् घमौरा र कसरी जोगिने? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
स्वास्थ्यखबर बिहीबार, वैशाख २९, २०७९, ०६:००:००
प्रश्न: गर्मी समयमा बालबालिकाको छालमा किन घमौरा आउँछन्? यस्तो समस्याबाटर कसरी जोगिने?
डा दिनेश सिवाकोटीको उत्तर:
बढ्दै गरेको तापक्रमले तराईं लगायत काठमाडौं उपत्यकामा समेत बालबालिकामा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बिन्ध समस्या आउने गरेका छन्। कान्ति बाल अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँ हरेक दिन कयौं बिरामीहरु घमौरा, घाउ, खटिरा र कीराको टोकाइबाट आउने एलर्जीको समस्या लिएर आउने आइरहेका हुन्छन्। गर्मी मौसममा अन्य समयभन्दा तुलनात्मक रुपमा ब्याक्टेरियाको संक्रमणबाट हुने छालाका समस्या बढी देखिन्छन्।
किन आउँछन् यी समस्या?
घमौरा धेरैजसो घाँटीमा, काखीमा वा कापमा देखिने भएपनि कहिलेकाहिँ अन्य भागमा पनि देखिन सक्छन्। गर्मी वातावरण, बाक्लो लुगा, ज्वरो आउँदा घमौरा आउन सक्छन्। भर्खर जन्मिएका बच्चामा भने पसिनाको ग्रन्थी राम्रोसँग विकास भइनसकेको हुनाले घमौराको समस्या बढी देखिन्छ।
त्यसैगरी गर्मीमा ब्याक्टेरियाकोबाट हुने छाला सम्बन्धि संक्रमण बढी देखिन्छ। फहोहोर खेल्ने, हातखुट्टा नियमित सफा नगर्ने, नियमित ननुहाउने र प्रदूषित वातावरण मुख्य कारण हुन्।
गर्मीबाट जोगिनु नै घमौरा आउन नदिने पहिलो उपाय हो। खाशगरी चर्काे घाममा ननिस्किने र बच्चालाई सक्दो ननिकाल्ने, हल्का पातलो, खुकुलो सुतिको कपडा लगाउने, गुम्सिने, साँघुरो र बाक्ले कपडा प्रयोग नगर्ने गर्नुपर्छ। बालबच्चालाई सक्दो शितलमा राख्ने गर्नुपर्छ। गर्मीमा पनि आगोमा सेक्ने वा घाममा राख्ने कतिले गरेका हुन्छन्। यस्तो बिलकुलै गर्नुहुँदैन।
ब्रस गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु के-के हुन्? ब्रस गर्ने तरिकाहरु छन्। ब्रस गर्दा सिधा गर्नु हुँदैन। गिजाबाट दाँत तर्फ बिस्तारै फोहोर निकाल्ने बाटोमा गर्नुपर्छ। ब्रस गर्दा विशेष गरि फ्लोराइड भएको मञ्जनहरु प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। बुधबार, चैत २, २०७८